(trg)="7.6"> မိမိတို့ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးကြပါ ၊
(trg)="14.10"> ဖန်တီးနိုင်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ရေး ပွင့်လင်းသော ကွန်ယက်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်
(src)="2.1"> Tata Ministro Carlos Romero jupaw aka operación uka apnaqatayna , katxañatakix unidades especiales de policías ukanakampiw irnaqatayna .
(trg)="1.2"> လာ ​ ပတ် ( ဇ် ) တွင် ရေ ​ ဒီ ​ ယို ​ သတ္တိ ​ ကြွ ယူ ​ ရေ ​ နီ ​ ယမ် ​ များ ဖမ်းဆီး ​ ရမိ
(src)="7.1"> Qilqiri ukhamarak yatiyiri ( periodista ) Andres Gómez Vela jilax Twitter cuentapanw qilqt 'i ( @ andrsgomezv ) :
(trg)="3.2"> ထို့ကြောင့် ၎ င်းဓာတ်သတ္တုများသည် ရေဒီယိုသတ္တြွိကပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်း သံသယမှာ မရှင်းလင်းခဲ့ပေ ။
(src)="7.2"> @ andrsgomezv : Bolivia markax janiw # uranio uka utjayirikiti , Kawkhatsa akax uñstpacha ?
(trg)="4.1"> ရဲများက ဩဂုတ်လ ( ၂၈ ) ရက်နေ့တွင် လာပတ် ( ဇ် ) ၊
(src)="7.3"> Inas tránsito ukankchïna yaqha markanakar mistuyañataki , sasniwa Viceministro Pérez ukax satyana .
(src)="8.2"> @ mrduranch : @ Fer _ SanMartin ¿ fuente ? # uranio ? ukax mä recipiente de plomo ukar suma imataw apanaqasiñapa , jan walt 'ayiriwa .
(trg)="5.2"> အရွဲ့တိုက်ခြင်းများအပါအဝင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် မှတ်ချက်များမှာ လူမှုကွန်ရက်များတွင် # uranioဟူသော တွစ်တာခေါင်းစဉ်အောက် ၌ ဖော်ပြခဲ့ကြသည် ။
(src)="8.3"> Andres Gómez Vela ( @ AndrsGomezV ) uñt 'ayarakinwa :
(src)="1.1"> Mä zambiano waynuchux " Profesional Certificado por Microsoft " ukwa katuqatayna
(trg)="1.2"> ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်ရှိ ဇမ်ဘီးယားအနွယ် ၊
(src)="5.1"> Foto de Sam Kimbinyi , extraida de su perfil de Twitter .
(trg)="4.1"> ဆမ် ကင် ​ ဘီ ​ ညီ ​ ၏ ဓာတ် ​ ပုံ ၊
(src)="6.1"> Global Voices ukax Sam jupampiw correo electrónico uksatuq jikxatasitayna :
(trg)="4.2"> ၄င်း ​ ၏ တွစ် ​ တာ ​ မှ ယူထားသည်
(src)="6.2"> Jichha mar achuq phaxsin , nayax khaysa Reino Unido viajkaspayax mä uruw alasirinakaxamp ukar Microsoft IT Academy yaticht ’ atanakaxamp ukar Oficinas de Microsoft en Seattle ukan irnaqirnakapamp tantachawin chikacht ’ asiwayta .
(trg)="6.2"> မိုက် ​ ခ ​ ရို ​ ဆော့ ( ဖ် ) အိုင်တီ အကယ်ဒမီကနေ လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ သုံးစွဲသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ထွက်လာတဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်အတွက် ယူကေကို တစ်ရက်လာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပေါ့ ။
(src)="7.1"> Aka pä tunk suxta llamay phaxsit aka pä waranq tunka pusini maran , nayax qalltiri Lite Windows Phone uka uñacht ’ awayta .
(trg)="7.1"> ၂၀၁၄ မေ ၂၆ရက်နေ့မှာတော့ ဝင်းဒိုးဖုန်းစတိုးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ပရိုဂရမ်ငယ်ဖြစ်တဲ့ လိုက်ကို တင်ခဲ့တယ် ။
(src)="7.2"> Kunawrasati nayax wal thaqaskayata mä aplicación uka jan jikisax mayak matt ’ xattawayitu kunams aplicación uka uñstayirista .
(trg)="7.2"> ကြော်ငြာမပါဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိမယ့် ဓာတ်မီးပရိုဂရမ်ကို လိုက်ရှာရင်းနဲ့ အကြံရခဲ့တာလေ ။
(src)="7.3"> Kimsa qallq uru saraqataru wali jisk ’ achawinak Ridding Windows ukanakankirit katuqawayta , ukat kimsa patak apaqawinak katuqawayta ukar phisqa estrellamp chhijllstata .
(trg)="7.3"> ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ခုမှရှာမတွေ့တဲ့အခါကျ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ။
(src)="7.4"> Ukat märitutsti uka aplicación " New and Rising " uksan chicaht ’ taxiwa , jichha qhipar juk ’ amp nayrar sartañap munta ukamarus yatintawimp Ciencias Computacionales en la Universidad ukasar mantañ munaraktwa .
(trg)="7.4"> ရှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက် ရတ်ဒစ် ဝင်းဒိုးဖုန်း အသိုင်းအဝန်းက ဝေဖန်မှုတွေရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒေါင်းလုပ်ချတာ အကြိမ် ( ၃၀၀ ) ရှိခဲ့ပြီး ကြယ်ငါးလုံးပေးတာ တစ်ကြိမ်ရခဲ့တယ် ။
(src)="7.5"> Kimbinyi jupax mä bolitin yatiyawinx akham uñt 'ayatawa :
(trg)="7.7"> ၄င်း ၏ ကောလိပ်မှ သတင်းစဉ်စာစောင်တွင် ကင်ဘီညီပြောသည်ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားသည်မှာ ၊
(src)="7.7"> Aka macha amuyujax wali askipuninwa kunawrasati proyecto del empleador de microsoft uk sarantayapkayata ukjaxa .
(trg)="7.10"> ပြီးတော့ ဒီနယ်ပယ်က ဘယ်လောက်ကျယ်ပြောလဲဆိုတာလည်း သိလိုက်ရတယ် ။
(src)="7.8"> Ukat uka aplicación ukax juk ’ amp sum tukuyatawa .
(trg)="7.12"> အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်ငယ်တစ်ခုကို ရေးနိုင်ခဲ့တယ် ။
(src)="8.1"> Microsoft ukax Kimbinyi juparuw mä tuit ukan jallallt 'awayi :
(trg)="8.4"> com / 8JRfgXNynL — မိုက်ခရိုဆော့ ( ဖ် ) ပညာရေး ( @ microsofteduk ) ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၊
(src)="1.1"> Butchulla arurux jayllintäwinakampiw ch 'amanchasipki
(trg)="1.1"> ကလေးချော့တေးများ သီဆိုကာ ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ထိန်းသိမ်းခြင်း
(src)="1.4"> Tradicionales uraqininakax Butchulla markachirinakawa , jupanakax aka musphañ paisaje natural ukar sutiyapxarakitaynawa K ’ gari ukax sañ munarakiwa “ suma k ’ ajkir uraqi ” .
(trg)="3.1"> သို့ပေမဲ့ ဘချူလာ လူမျိုးများသည် သူတို့အား နယ်မြေမှ နောက်ဆုံး ထွက်သွားရအောင်ပြုလုပ်သော ကိုလိုနီ ပြုသူတွေ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် ။
(src)="5.1"> Mayamp Aru Butchulla jaktayañ programan yanapaw ch ’ amapampix , jichurur urunx jaktaskiwa .
(trg)="6.2"> မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ စိတ်၀င်စားမှုများလာအောင် အားပေးဖို့ ကူညီမည့် အဘိဓာန်များ ၊
(src)="6.1"> Medios digitales ukhamarak internet ukanakax walpun mayamp ar jaktayañatak ch ’ amanchapxi. proyecto ABC " Tayka aru " ukankirjamarux ( Mother tonque ) , video productores de la Corporación de Radiodifusión de Australia jupanakax tantacht ’ asipxarakiwa , video ukanak lurañataki participación de comunidades locales jupanakampi chiqak l ’ upt ’ asa khä mayamp tayna ar jaktayañaru .
(trg)="7.2"> ABC Open ၏ " Mother Tongue ( မိခင်ဘာစကား ) " ဟုခေါ်သော စီမံကိန်း ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့် ဒေသခံ ရပ်ရွာများသည် အေဘီစီ ခေါ် သြတစတြေးလျ ရုပ်သံလွင့် ဌာန ( Australia Broadcasting Corporation ) မှ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေါင်း ၍ ကနဦး တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများ ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းကို အချက်အချာထားသည့် ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးရန် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် ။
(src)="2.2"> Tawaqunakax Capital de Phnom Penh uksaruw jupanakax Jach ’ayatiqañ utar yatiqiriw jutapxi , ukatw jupanakax akhaw aski yatxatäwinak jikxatapxi .
(trg)="3.2"> ဇတ်လမ်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ပြောပြနိုင်ရန် စီမံချက်တစ်ခုရေးဆွဲ ၍ ၄င်းတို့ကို လေ့ကျင့်ပံ့ပိုးပေးနေပြီ ဖြစ်သည် ။
(src)="3.1"> Pruyiktux “ Empoderandoalas Cloghers " sutimp uñt ’ atawa , jichhakiw nayrïr face ukamp tukuyapxi , microfinanciamiento de Rising Voces uksat 2014 maran yanap katuqasa .
(trg)="3.3"> ထိုလူငယ်မျာသည် တက္ကသိုလ်ဘာသာရပ် အသီးသီးကို လေ့လာရန် ဖနွမ်းပင်သို့ ရောက်ရှိလာကြပြီး ဤအခွင့်အလမ်းကို လက်လှမ်းမှီ ရယူနိုင်ခဲ့ကာ ၄င်းတို့နှင့် အတွေ့အကြုံတူ ၊
(src)="3.2"> " Clogher " arux sañ muniwa , Camboya markan bloguer apnaqir warminaka .
(trg)="3.4"> နောက်ခံသမိုင်းတူသော အခြားသူတို့နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင် ပြီဖြစ်သည် ။
(src)="6.4"> Ukampirus paylläwinakas wali juk ’ akirakiwa , ukax wila masitakis pisiwa , irnaqirinakax ukham jan walt ’ äwinakampiw jikxatasipxi .
(trg)="8.1"> ကျေးလက်နေ ကမ္ဘောဒီးယားအများစုအဖို့ အလုပ်အကိုင် အတည်တကျ ရရှိရန်အလို့ငှါ နိုင်ငံအနှံ့အပြားသို့ရွှေ့ပြောင်းရန် လိုအပ်သော အခြေနေကိုကြုံတွေ့နေရသည် ။
(src)="6.5"> Sum Dany jupax textil uksan irnaqirinakampiw aruskipt ’ i , irnaqt ’ irinakax jakäwinakapxat arxayt ’ apxi .
(trg)="8.2"> သို့သော် ၄င်းတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသော ကြမ်းတမ်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကို ပြင်ပမှ လူတို့သတိမထားမိကြပေ ၊
(src)="6.6"> Mayni mamax fábrica irnaqiriwa ukat jupax akham sarakiwa : " Sindicato uksanx janiw sinti control ukax utjakanti , ukampirus nayatakix mayaw jan askikanti , janiw kims kuti baño ukar sarañas utjkanti .
(trg)="8.3"> အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားကူးသန်းရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ အလုပ်သမား ၉၀ % မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး အလုပ်သမစုစုပေါင်း ( ၃ ) သိန်းနီးပါးခန့် ရှိသည် ။
(src)="7.3"> Pisinkañax utjakipuniwa ukatw yaqhip awki taykanakax wawanakapar jach ’ayatiqañ utar jan khitapkiti .
(trg)="8.4"> မိသားစုကို ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ရန်ပင် မလုံလောက်သည့် အဆမတန်နိမ့်ပါးသော လုပ်အားခကိုသာ ရရှိရုံမက အလုပ်သမများသည် အခြားသော အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်း ကြုံရသေးသည် ။
(src)="8.1"> Chroeng Sopheakvirya jupax provincia de Kandalsistema escolar uksat qillqt ’ awayi ukax sureste de Camboya uksan jikxatasi , yaqhippachax awkinakapax suplementarias yatichäwitx yatichirirux yaqha payllapxi :
(trg)="8.5"> ဆွန် ဒန်နီမှ ၄င်းတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ အတွေ့အကြုံများကို အသေးစိတ် ပြန်ပြောပြခဲ့သော အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမတစ်ချို့ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည် ။
(src)="8.2"> Yaqhip pachaw awkinakapax yatichirirux manupxi ukhamawa , ukat yatichirinakax yatiqirinakarux yatichaskakiwa .
(trg)="8.16"> သူစကားပြောရင် အရမ်းကြမ်းပြီးတော့ အလုပ်သမားတွေ ဖျားနာပြီဆိုရင်လည်း ဆေးဝါးက ဘယ်တော့မှ အပြည့်အစုံမရှိဘူး ။
(src)="8.4"> Phnom Penh ukan mä jawirap q ’ umachäwi
(trg)="8.18"> အခြား လူနာတွေကိုဆို အနံ့နံလို့ဆိုပြီး ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ ပေးမထားဘူး .
(src)="10.1"> Limpieza del Río en Phnom Penh .
(trg)="8.21"> တော်တော်ဆိုးပါတယ် ။
(src)="10.2"> Foto de Cheng Sreymom .
(trg)="8.25"> " အမှန်ပင် .
(src)="11.1"> Walja yatiqirinakaw aka yatichawtuqinakarux purt ’ apxi .
(trg)="10.6"> ဆရာတွေကလည်း ၄င်းတို့ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သင်ပေးသည် ။
(src)="11.2"> Cheng Sreymom jupax jichhakiw jawiranak q ’ umachañtuqirux chikanchasiwayi .
(trg)="10.7"> နားလည်မှုနှင့် ဆက်သင်ပေးသည့် သဘောမျိုးဖြစ်သည် ။
(src)="11.4"> Jawiranakax sinti jan walt ’ ayatawa kunalaykutï uka jawir thiyanakanx t ’ unanakaw uñjasi ukaw jan walt ’ aykiti .
(trg)="10.11"> အချို့ကျောင်းသားများမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိသားစုမှဖြစ်သော်လည်း စာတော်ကြသည့်အတွက် ဆရာများအနေဖြင့် လက်လွှတ်မခံလိုကြသည်များလည်း ရှိသည် ။
(src)="11.5"> Sreymom jupax markapan askin jikxatsiñapatakix uka t ’ unanak apthapiñampiw chikanchasiwayi ukatx kunats ukham t ’ una apthapiñamp saranti ukxat uñacht ’ ayi .
(trg)="12.6"> မြစ်ကမ်းဘေးသည် ဖနွမ်းပင် ၏ ခရီးသွား ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အမျှ ပြည်တွင်း ၊
(src)="11.7"> Ukampirus yaqhip markachirinakax t ’ una q ’ añunakax samanar jan walt ’ ayki ukxat jan suma yatipxatapatx jawir thiyanakarux jaqtasipkakiwa ukampix turistanakarus jan walt ’ ayksna ukhamawa , jupanakax uka thujsa saman mukhintapxi ukakipkarakiw markarux jan wali uñjayapxi .
(trg)="12.8"> သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိန်းစောင့်ရှောက်ရန် အသိမရှိကြပဲ အမှိုက်များကိုဖြစ်သလို စွန့်ပစ်နေကြသည့် နိုင်ငံသားအချို့ကြောင့် ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သော ဤနေရာသည် ညစ်ညမ်း ၍ အနံဆိုးဝါးကာ ခရီးသွားများ ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူတို့အပေါ် အမြင်မှားနေစေသည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာဖြစ်သည် ။
(src)="11.10"> Niyakixay nayrïr t ’ aqax pruyiktut tukuschixa , ukatx CCDH uksaruw p ’ arxtayawayi , juk ’ amp yanapt ’ añataki .
(trg)="12.9"> ကျွန်ုပ် အာပိုချန်း သည် မြို့အားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ၀င်ခဲ့သော နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည် ။
(src)="12.1"> Ramana Sorn juparuw jemer ukat inglés arur jaqukipatapat jallallt ’ ata .
(trg)="12.13"> ခမာ ဘာသာစကားမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပေးခဲ့သော ရာမနာဆွန်အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည် ။
(src)="1.1"> Myanmar markan uraq khathattäwix 200 jila nayra ( templo-nakaruw ) jan walt 'ayawayatayna
(trg)="1.1"> ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် ရှေးဟောင်းဘုရားစေတီ ၂၀၀ ကျော် ပျက်စီးခဲ့
(src)="1.3"> Sitio web Servicio Geológico uksat , Estados Unidos markatx jamuqanak uñt 'ayi .
(trg)="1.4"> ငလျင် ၏ ဗဟိုချက်နှင့် ပမာဏကို ပြသောပုံကို ယူအက်စ်ဘူမိဗေဒ စမ်းစစ်လေ့လာရေး ဝဘ်ဆိုက်မှ ရရှိ ။
(src)="3.1"> 187 ( templos ) ukhaw ladrillo ukat luratatayna nayra capital de Bagan uksana .
(trg)="2.1"> သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က လှုပ်ရှားခဲ့သည့် အင်အား ၆ .
(src)="6.2"> Manqhaxanw kunjams Myanmar uksan wali uñt 'at ( templos ) ukanakax jan walt 'ayata taqi ukanakw uñacht 'ayi :
(trg)="3.3"> အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အရေးပါတဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန နေရာတွေထဲမှာ ပုဂံက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားက အန်ကောဝပ် နှင့် အင်ဒိုနီးရှားက ဘိုရိုဘုဒါ နေရာတို့နှင့် မကြာခဏ နှိုင်းယှဉ်ပြလေ့ရှိပါတယ် ။
(src)="1.2"> Parodia del famoso afiche " We Can Do It ! "
(trg)="1.2"> မညီမျှမှုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပစ်လိုသော Wikimujeres ခေါ်ဝီကီအမျိုးသမီးများ
(src)="1.3"> ( Atsnaw lurañxa ) .
(trg)="1.3"> A parody of the famous " We Can Do It !
(src)="1.5"> Dominio público .
(trg)="1.6"> Public domain .
(src)="2.2"> Fundación Wikimedia tamax uksatuqitx amuykipayañapawa , ukaw mä jach 'a entidad ukhama uraqpachan enciclopedia libre ukar apnaqi , uka chachaw jila warmiw jila ukarux khuskhachañar yanapt 'aspawa .
(trg)="2.3"> ၎ င်းအခြေအနေသည် Wikipediaတွင် စွယ်စုံကျမ်းရေးသားသူ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကော ထိုအင်တာနက် website ကြီးကို စီမံခန့်ခွဲ ထိန်းသိမ်းသော Wikimedia Foundation အဖွဲ့ကြီးအတွက်ပါ စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပါသည် ။
(src)="3.2"> Web pajinapax uksat uñt 'ayi :
(trg)="3.2"> ၎ င်းတို့ ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ ၏ အဆိုအရ ။
(src)="3.6"> Aka yatichaw tantachäwinakax ña ukhat ñä ukharuw apasi , Wikipedia uksan juk 'amp askin qillqatanak utjayañataki .
(trg)="3.7"> တိုးတက်ဆဲနိုင်ငံများမှ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ရေးသားသော အကြောင်းအရာနှင့် ဆောင်းပါးအရေအတွက်တိုးပွားလာစေရန်တို့ ဖြစ်သည် ။